Thit Thit Han
An interview with Thit Thit Han from Spectrum
PK Forum : What is 'open contracting', and why should it beapriority now for civil society groups to engage with?
ပွင့်လင်းမြင်သာသော စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုကိစ္စရပ်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ့အတွက် (သို့) ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံတော်မှ (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများအသီးသီးမှ ချုပ်ဆိုသော ဝယ်ယူမှု ဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြည်သူနှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သတ်သူများ ဥပမာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းဟု ယေဘုယျ မှတ်ယူနိုင်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုစနစ်သည် အစိုးရအား ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တာဝန်ခံမှုမြင့်မားသော အစိုးရဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အားလုံးအတွက် မျှတသော တန်းတူ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရစေကာ ပြည်သူများအတွက်လည်း အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲခွင့် ရစေသည်။
အစိုးရသုံးစွဲသော ငွေကြေးအားလုံးသည် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာငွေများဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများအတွက် ရည်ရွယ်သုံးစွဲသော ကိစ္စရပ်များသည် ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမရှိ၊ ပေးထားသော ငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့် လျော်ညီသော ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှု ဟုတ်မဟုတ် ပြည်သူဘက်မှ လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာသော စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုက ဖန်တီးပေးသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရ၏ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုများနှင့် ဝယ်ယူမှုများသည် နိုင်ငံအများအပြား၌ ချစားမှု(လာဘ်စားမှု) အဖြစ်နိုင်ဆုံး နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် အရပ်သားစစ်စစ် ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်တွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အနေနှင့် ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော open contracting စနစ် မြန်မာပြည်တွင် ထွန်းကားလာစေရေးအတွက် တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍမှ အားစိုက် ကြိုးပမ်းရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
PK Forum: In particular you said that government procurement done wrongly could enflame tensions in the country? How would that happen?
ဥပမာဆိုရလျှင် အကယ်၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရသည် open contractများ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အာဏာပိုရှိလာမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်တွင် ရှိနေလျှင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ နိုင်ငံတော် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများဘက်မှ ကျေနပ်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းအခြေအနေသည် ရန်ကုန်ကဲ့သို့သော နေရာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်အောင် ကူညီရာရောက်နေကြောင်း တွေ့ရရှိရသည်။